【 တဈပတျအတှငျး နိုငျငံတကာသတငျး သုံးသပျခကျြ 】 အမရေိကနျ-တရုတျ အခငျးအကငျြးသဈ | Opinion Leaders
【 တဈပတျအတှငျး နိုငျငံတကာသတငျး သုံးသပျခကျြ 】 အမရေိကနျ-တရုတျ အခငျးအကငျြးသဈ
ယခုရကျသတ်တပတျ သတငျးတှထေဲမှာ သတိထားမိတဲ့ သတငျးတှေ အတျောလေးမြားပါတယျ။ဒီထဲမှာ အားလုံးကိုခွုံကွညျ့ရငျ သမ်မတဘိုငျဒငျရဲ့ ပထမရကျသတ်တပတျ အခငျးအကငျြး သတငျးတှရေယျ၊ ကိုဗဈနဲ့ဆကျနှယျပွီး ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှမှော မတညျမငွိမျမှုဖွဈတာတှေ စတဲ့ သတငျးတှကေ ယခုတဈပတျမှာ အမြားဆုံး စိတျဝငျစားစရာသတငျးတှေ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုသတငျးတှထေဲကနေ တခွားသတိထားမိစရာ သတငျးရှိပါတယျ။အမရေိကနျ ဒုသမ်မတအဖွဈ မကွာခငျကထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ မိုကျပနျ့ဈ တာဝနျကုနျဆုံးခြိနျမှာ နစေရာ နရောမရှိတဲ့သတငျး၊ တရုတျနိုငျငံ ရှမေိုငျးတှငျးပေါကျကှဲမှုမှာ မိုငျးလုပျသားကိုးဦး၏ ရုပျအလောငျးကို ထပျတှခေဲ့တဲ့အတှကျ သဆေုံးသူစုစုပေါငျး ၁၀ ဦးထိရှိလာတဲ့သတငျး၊ ပါကစ်စတနျ ပနျဂပျြပွညျနယျ ဂူဂရြနျဝါလာမွို့မှာ အမြိုးသားတဈဦးက ဂုဏျသိက်ခာအတှကျ ဇနီးနှငျ့ ကလေးငယျလေးဦးကို သတျဖွတျခဲ့တဲ့သတငျး၊ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက ကမ်ဘာ့အလှုပျရှားဆုံးမီးတောငျဖွဈတဲ့ မောငျမာရာပီမီးတောငျ ပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့တဲ့သတငျး၊ ကမ်ဘာတဈဝနျး စီးပှားရေးလုပျငနျးပေါငျးမြားစှာကနေ ဒျေါလာဘီလြံပေါငျးမြားစှာ ခိုးယူခဲ့တဲ့ Emotet ဆောဖျ့ဝဲလျ အသုံးခြ ဟကျကာအဖှဲ့ကို နိုငျငံတကာပူးတှဲစဈဆငျရေးအဖှဲ့က ဖွိုခှငျးနိုငျခဲ့တဲ့သတငျး၊ တူရကီရဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို တနျပွနျဖို့ ယူရို ၂.၅ ဘီလီယံ (အမရေိကနျဒျေါလာ ၃ ဘီလီယံ) တနျဖိုးရှိ စဈလယောဉျရောငျးဝယျမှုဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြကို ဂရိနဲ့ ပွငျသဈတို့ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တဲ့သတငျး၊ ပါကစ်စတနျသညျ နြူကလီးယားဒုံးကညျြ နညျးပညာမြားကို တူရကီသို့ လှဲပွောငျးပေးခဲ့တဲ့ အစီရငျခံစာ ထှကျပျေါလာတဲ့သတငျး၊ အီတလီမှာ ဝနျကွီးခြုပျ ကှနျတီ နုတျထှကျသှားတဲ့သတငျး စတဲ့ သတငျးတှလေို သတငျးအခြို့လညျး ယခုသီတငျးပတျမှာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
တရုတျ-အမရေိကနျ စဈပှဲသဈ လာတော့မလား
ဇနျနဝါရီ ၂၀ ရကျ မှာ အမရေိကနျသမ်မတအဖွဈ စတငျတာဝနျယူလာခဲ့တဲ့ ဘိုငျဒငျအနနေဲ့ ပထမဆုံးတှကွေုံ့ခဲ့တာက တရုတျနဲ့ နိုငျငံရေးပွဿနာပါဘဲ။တရုတျဘကျက ထရမျ့အဆငျး ဘိုငျဒငျအတကျမှာ ရုတျတရကျ ယခငျအမရေိကနျသမ်မတ ထရမျ့လကျထကျမှာ တာဝနျယူခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ ထိပျတနျးတာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျတှကေို အရေးယူပိတျဆို့ကွောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။ဒါဟာ သမ်မတအဖွဈ ဘိုငျဒငျ က တာဝနျယူပွီး မိနဈအနညျးငယျအကွာမှာပါ။
စစခငျြး ပွဿနာနဲ့စခဲ့ရတဲ့ ဘိုငျဒငျအတှကျ ဒါဟာ တာထှကျတော့မလှခဲ့ပါဘူး။ဘကေငျြးကနေ အမရေိကနျအရာရှိမြားအပျေါ ပိတျဆို့အရေးယူမှု ကွညောခဲ့တဲ့အတှကျ ဒါဟာ တနျပွနျလို့ဆိုရပမယျ့နောကျကှယျမှာ ဒီထကျပိုပွီးလေးနကျတဲ့ ထိရောကျမှုရှိနပေါတယျ။အမရေိကနျမှာ အစိုးရတာဝနျကွီးကွီးမားမားယူတဲ့သူတှမှော လုပျခလစာနညျးပါတယျ။ရာထူးတာဝနျကနေ အနားယူပွီးမှသာ ကုမ်ပဏီကွီးတှကေ အကွံပေး၊ ဒါရိုကျတာအဖွဈ ခနျ့အပျလို့ လုပျခလစာကောငျးကွတာဖွဈလို့ တရုတျနိုငျငံဘကျက ထရမျ့အစိုးရလကျထကျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့သူတှကေို ရညျရှယျပွီး ကုမ်ပဏီကွီးတှကေ အလုပျမခနျ့နိုငျအောငျ ရညျရှယျကာ ပိတျဆို့ခဲ့တာပါ။သာမနျအားဖွငျ့ကွညျ့ရငျ အမရေိကနျ အစိုးရတာဝနျယူခဲ့တဲ့သူတှကေို တရုတျနိုငျငံကပိတျဆို့တာ ဘာမှသိပျမထူးဆနျးပမေယျ့ သသေခြောခြာကွညျ့မယျဆိုရငျ တရုတျဘကျက ပိတျဆို့မှုက အမရေိကနျအာဏာပိုငျတှေ အထူးသဖွငျ့ အမရေိကနျနိုငျငံရေးသမားတှကေို အထိနာစပေါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး ထိပျတနျး ရီပတျဘလဈကနျအမတျတှကေ ဂြိုးဘိုငျဒငျ ကို သမ်မတတာဝနျယူယူပွီးခငျြး ပိတျဆို့အရေးယူမှု ကွညောခဲ့သော တရုတျကို ပိုမိုပွငျးထနျစှာအရေးယူဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။
တရုတျဘကျက ပိတျဆို့အရေးယူမယျ့ ၂၅ ဦးစာရငျးမှာ ထရမျ့အုပျခြုပျရေးမှ အဖှဲ့ဝငျဟောငျးတှဖွေဈတဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မိုကျပှမျပီအို၊ ကုနျသှယျရေးအကွံပေး ပီတာနာဗာရို၊ အမြိုးသားလုံခွုံရေးအကွံပေး ရောဘတျအိုဘရိုငျရနျ၊ ကနျြးမာရေးဝနျကွီး အဲလကျဈအဇောနှငျ့ ဒုတိယအမြိုးသားလုံခွုံရေးအကွံပေး မကျသရူးပျေါတငျဂြာတို့ ပါဝငျပါတယျ။ဒီလို တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျရာမှာ ဒီလူတှကေို “တရုတျနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာကို ပွငျးထနျစှာခြိုးဖောကျခွငျး” နဲ့ တရုတျအပျေါ အမရေိကနျ၏မူဝါဒမှာ “လှနျကဲတဲ့လုပျဆောငျမှု” မှာ အကွီးအကယျြတာဝနျရှိတယျဆိုပွီး ပွောခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ တရုတျဘကျက ထရမျ့လကျထကျ ရှနျကနျြး၊ ဟောငျကောငျကိစ်စတှနေဲ့ တရုတျအရာရှိတှကေို အရေးယူမှုကို လကျတုံ့ပွနျတာဖွဈပမေယျ နိုငျငံတကာကတော့ အသဈတကျလာတဲ့ ဘိုငျဒငျအစိုးရကို ဘကေငျြးက နိုငျငံရေးအရ စမျးသပျနတောအဖွဈ ရှုမွငျကပြါတယျ။ဒီမိုကရကျတဈအစိုးရဖွဈတဲ့ ဘိုငျဒငျအစိုးရ ရဲ့ “တရုတျနိုငျငံကို ပိုမိုတငျးကပျြပွငျးထနျတဲ့ ခညျြးကပျမှုကို ဆကျလကျကငျြ့သုံးမယျ” ဆိုတဲ့ မူဝါဒကွောငျ့ တရုတျအနနေဲ့ ဘိုငျဒငျအစိုးရရဲ့ တုံ့ပွနျမှုအနအေထားက ယခငျဒီမိုကရကျတဈဖွဈတဲ့ အိုဘားမားအစိုးရလကျထကျနဲ့ ဘာတှကှောဟခကျြရှိနမေလဲဆိုတာ သိလိုနတေဲ့ အနအေထားပါ။
ဒီနောကျမှာတော့ အမရေိကနျနဲ့ တရုတျအကွား အခွအေနကေ လငျြလငျြမွနျမွနျ ကစားကှကျတှရှေလေ့ာပါတယျ။တရုတျဘကျက ထိုငျဝမျလကွေောငျးထဲ ဝငျရောကျခဲ့တယျဆိုတဲ့အသံတှေ ထှကျလာပွီးနောကျမှာ တရုတျအစိုးရဘကျက တရုတျနိုငျငံ၏ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားကို နိုငျငံအခြုပျအခွာအာဏာနှငျ့ နယျမွတေညျတံ့ခိုငျမွဲရေးအတှကျ နိုငျငံရဲ့ဆုံးဖွတျထားခကျြကို ပွခဲ့တာလို့ တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။ထိုငျဝမျ လကွေောငျးကာကှယျရေးဇုနျထဲ တရုတျက ဗုံးကွဲလယောဉျ ၈ စငျးနှငျ့ ဂကျြတိုကျလယောဉျ ၄ စငျးကို စလှေတျခဲ့တဲ့အတှကျ ဒါဟာ အမရေိကနျအတှကျ သှေးတိုးစမျးခံရသလို ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ဇနျနဝါရီ ၂၃ ရကျကဖွဈခဲ့တဲ့ အဲဒီအငျအားပွသမှုအပွီးမှာ အမရေိကနျဘကျက အားခငျြးဆိုသလို ကွညောခကျြတဈစောငျထုတျပွနျပွီး ထိုငျဝမျအပျေါ စဈရေး၊ သံတမနျရေးနှငျ့ စီးပှားရေးဖိအားပေးမှုမြား ရပျဆိုငျးဖို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ဇနျနဝါရီ ၂၄ ရကျမှာလညျး တရုတျက နောကျထပျ စဈလယောဉျ ၁၆ စငျးကို စလှေတျခဲ့တယျလို့ ထိုငျဝမျဘကျက စှပျစှဲခဲ့ပါတယျ။
ဒီနောကျမှာ အမရေိကနျ လယောဉျတငျစဈသင်ျဘော USS Theodore Roosevelt တောငျတရုတျပငျလယျထဲ ဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ဒီလိုဝငျလာတဲ့အတှကျ တရုတျအာဏာပိုငျတှကေ တရုတျပိုငျနကျလို့ ကွညောထားတဲ့ ဘယျနရောကိုမဆို ဝငျရောကျလာတဲ့ ပွညျပသင်ျဘောမှနျသမြှကို ပဈခတျတာအပါအဝငျ လိုအပျသလိုလုပျဖို့ ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ခှငျ့ပွုခကျြပေးခဲ့တာက တရုတျနိုငျငံရဲ့ အမွငျ့ဆုံး ဥပဒပွေုအဖှဲ့အစညျးဖွဈတဲ့ တရုတျနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ပွညျသူ့ကှနျဂရကျအမွဲတမျးကျောမတီကပါ။ဒီလိုခှငျ့ပွုတာနဲ့ပတျသကျပွီးလညျး ဒါဟာ နိုငျငံတကာထုံးတမျးစဉျလာလို့ တရုတျဘကျက ကာကှယျပွောခဲ့ပါတယျ။ဝငျလာတဲ့ အမရေိကနျ တိုကျခိုကျရေးအုပျစုမှာ Roosevelt လယောဉျတငျသင်ျဘော၊ ပဲ့ထိနျးဒုံးကညျြတပျ ခရူဇာစဈသင်ျဘော USS Bunker Hill နှငျ့ ပဲ့ထိနျးဒုံးကညျြတပျဖကျြသင်ျဘော USS Russell နှငျ့ USS John Finn တို့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။တောငျတရုတျပငျလယျထဲမှာ ဒီလယောဉျတငျစဈသင်ျဘောအုပျစု ရှိနစေဉျအတှငျး လယောဉျစဈဆငျရေးမြား၊ ရကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုလကေ့ငျြ့ရေးမြား ဆောငျရှကျမယျဆိုတဲ့အတှကျ ဒါဟာ အတျောလေးကိုအန်တရာယျကွီးတဲ့အနအေထားထိ ရောကျခဲ့ပါတယျ။
အှနျလိုငျးစနဈဖွငျ့ကငျြးပသော ဒါးဗို့ဈကမ်ဘာ့စီးပှားရေးဖိုရမျမှာ တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖိနျ က စဈအေးတိုကျပှဲသဈ မစတငျဖို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ဒါဟာ ထရမျ့လကျထကျ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ မဟာမိတျတှကေို ပွနျလညျစုစညျးနတေဲ့ ဘိုငျဒငျရဲ့ အစီအစဉျတှကေို သှယျဝိုကျသတိပေးခဲ့တာပါ။ရှီ က "တခွားသူတှကေိုပဈပယျဖို့ ဒါမှမဟုတျ ခွိမျးခွောကျဖို့အတှကျ အုပျစုငယျတှဖှေဲ့တာ ဒါမှမဟုတျ စဈအေးတိုကျပှဲသဈ စတငျတာဟာ ကမ်ဘာကွီးကို အစိတျစိတျအမှာမှာဖွဈစဖေို့ တှနျးပို့နတောပါပဲ" လို့ပဲ ပွောခဲ့ပါတယျ။ဘိုငျဒငျ အနိုငျရပွီးကတညျးက တရုတျဘကျကနေ ဒျေါနယျထရမျ့လကျထကျမှာ ယိုယှငျးခဲ့ရတဲ့ သံတမနျရေးကို သမ်မတသဈ ဂြိုးဘိုငျဒငျ အစိုးရလကျထကျမှာ ဆကျဆံရေးပွနျလညျထူထောငျဖို့ တိုကျတှနျးထားတာပါ။
ဒီလို ထိုငျဝမျကြှနျးကွောငျ့ လတျတလော တရုတျနဲ့ အမရေိကနျ တငျးမာမှုပွဿနာက ဘိုငျဒငျအတှကျ အထူးအလေးထားရမယျ့ ပွဿနာတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ဘိုငျဒငျရဲ့ အစိုးရအဖှဲ့မှာ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအဖွဈ တာဝနျယူတဲ့ ဘလငျကနျ ကို ဇနျန၀ါရီ ၂၆ ရကျမှာ ဆီးနိတျက အတညျပွုပွီးနောကျ ဘလငျကနျ က တရုတျနဲ့တငျးမာမှုကို ဦးဆုံးကိုငျတှယျလာရဖို့ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး တာဝနျမယူခငျ ရုရှား၊ တရုတျနှငျ့ အီရနျတို့ထံမှ စိနျချေါမှုမြားကို တနျပွနျရနျ စုစညျးညီညှတျသော တပျဦးတဈခု တညျဆောကျသှားမညျဆိုပွီးပွောခဲ့တဲ့ ဘလငျကနျ က ဇနျနဝါရီ ၂၇ ရကျမှာ တရုတျနဲ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျတာ အမရေိကနျအတှကျ အကြိုးစီးပှားဖွဈတယျဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ထမျးဆောငျတဲ့ရကျမှာ ပွောခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီရကျမှာဘဲ အမရေိကနျနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျသံအမတျကွီးက တရုတျပွညျသူ့ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ လကျနကျဖကျြသိမျးရေးအသငျးနှငျ့ ကာတာစငျတာတို့ပွုလုပျတဲ့ အှနျလိုငျးဆှေးနှေးပှဲမှာ မှားယှငျးအကဲဖွတျမှုဖွဈမညျဟု တရုတျနိုငျငံကို သနေင်ျဂဗြူဟာရနျဖကျနှငျ့ စိတျကူးယဉျရနျသူအဖွဈ သတျမှတျပါက ကွီးမားသော သနေင်ျဂဗြူဟာ မှားယှငျးအကဲဖွတျမှုဖွဈလိမျ့မယျဆိုပွီး သတိပေးခဲ့ပါတယျ။ဒီပှဲမှာ တရုတျသံအမတျကွီးက "ကနြျောတို့မှာ ပွိုငျဆိုငျမှုရှိကောငျးရှိမယျ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့က ရနျဖကျတှမေဟုတျဘူး။ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသူတှဖွေဈအောငျ ကနြျောတို့ကွိုးစားသငျ့တယျ" ဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီအနနေဲ့ ပွညျသူမြားပြျောရှငျရေးနှငျ့ နိုငျငံပွနျလညျအားအငျပွညျ့ဖွိုးရေး တာဝနျကိုသာ ဆုပျကိုငျထားတယျဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ဇနျနဝါရီ ၂၇ ရကျမှာဘဲ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟောငျးဖွဈပွီး လကျရှိသမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒငျရဲ့ ရာသီဥတုရေးရာ သံတမနျဖွဈတဲ့ ဂြှနျကယျရီ က နှဈနိုငျငံရဲ့ဆကျဆံရေးအပျေါ သကျရောကျမှုတှရှေိနတေဲ့ အခွားသဘောထားမတိုကျဆိုငျတာတှကေနေ ခှဲထှကျပွီး အမရေိကနျအနနေဲ့ တရုတျနဲ့ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှုအရေး ဆှေးနှေးပှဲတှေ ဆကျလကျကငျြးပသှားဖို့ ကွိုးစားသှားမှာဖွဈတယျဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။လကျရှိမှာ အမရေိကနျနဲ့ တရုတျအကွား မပွီးပွတျသေးတဲ့ ကုနျသှယျရေးစဈပှဲ၊ ပွငျးထနျနဆေဲ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဘေးတှကွေောငျ့ အားလုံးအတှကျ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ နိုငျငံတကာအကပျြအတညျး ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျအနနေဲ့ တရုတျဩဇာအာဏာကွီးထှားလာတာကို ထိနျးခြုပျဖို့ ထရမျ့လကျထကျမှာ လုပျဆောငျခဲ့သလို ဘိုငျဒငျလကျထကျမှာလညျး ဆကျလကျကွိုးစားမယျ့အနအေထား သခြောပေါကျရှိခဲ့ပါတယျ။အဓိက ကာလကွာရှညျရနျသူဖွဈခဲ့တဲ့ ရုရှားနဲ့ ကွနျ့ကွာနတေဲ့ New Start နြူကလီးယားလကျနကျထိနျးခြုပျရေး သဘောတူညီခကျြကို ဘိုငျဒငျနဲ့ ပူတငျအကွား ဖုနျးနဲ့ဆကျသှယျဆှေးနှေးမှုအတှငျး ရယူနိုငျခဲ့လို့ တရုတျပတျလညျနိုငျငံတှနေဲ့ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြတှကေို ပထမ ရကျ ၁၀၀ အတှငျး ရယူနိုငျဖို့ ပွငျဆငျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ဇနျနဝါရီ ၂၄ ရကျမှာဆိုရငျ ဂပြနျကာကှယျရေးဝနျကွီး နိုဘူရို ကီရှီနဲ့ အမရေိကနျကာကှယျရေးဝနျကွီး လှိုကျအျောစတငျတို့အကွား ဂပြနျ-အမရေိကနျ လုံခွုံရေးသဘောတူညီခကျြ အပိုဒျ ၅ ဖွဈတဲ့ တိုကျခိုကျမှုဖွဈရငျ အမရေိကနျက ဂပြနျနိုငျငံကို အကာအကှယျပေးမယျ့ သဘောတူညီခကျြကို ထပျမံအတညျပွုနိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒါဟာ ဂပြနျနဲ့ တရုတျအကွား အငွငျးပှားနတေဲ့ ဆနျကာကုကြှနျးစုနဲ့ သကျဆိုငျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဂပြနျဝနျကွီးခြုပျ ယိုရှီဟီဒီဆူဂါနဲ့ အမရေိကနျသမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒငျနှငျ့ ဖုနျးချေါဆိုမှုအတှငျးမှာလညျး အမရေိကနျ နဲ့ ဂပြနျ နှဈနိုငျငံ မဟာမိတျပေါငျးစညျးမှုကို ပိုမိုတောငျ့တငျးခိုငျမာအောငျလုပျဆောငျဖို့ သဘောတူညီခဲ့တယျ ဆိုပါတယျ။ဇူလိုငျ ၂၈ ရကျက ဖိလဈပိုငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနဲ့ ဖုနျးဆကျပွောဆိုမှုမှာလညျး အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဘလငျကငျရဲ့ ပွောဆိုမှုမှာလညျး တရုတျရဲ့ဖိအားကို တှနျးလှနျဖို့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှနေဲ့အတူ ရပျတညျမယျဆိုပွီး ပွောခဲ့တာကို တှရေ့တဲ့အတှကျ ဘိုငျဒငျလကျထကျ တရုတျနဲ့ အမရေိကနျ ဆကျဆံရေးက ပိုကောငျးလာမယျဆိုတဲ့ ယူဆခကျြက ပိုမှေးမှိနျလာခဲ့ပါတယျ။
ဘိုငျဒငျလကျထကျ တရုတျကိုထိနျးခြုပျမယျ့ အစီအစဉျမှာ တရုတျနိုငျငံပတျလညျရှိ နိုငျငံတှကေ ဒီကစားပှဲမှာ အရေးပါလာနိုငျတဲ့အပွငျ ဒီအငျအားကွီးနှဈနိုငျငံ မတညျငွိမျမှုနဲ့ နိုငျငံရေးကစားမှုကို ခံရဖို့မြားနပေါတယျ။ဒီအတှကျ ဘိုငျဒငျရဲ့ မူဝါဒနဲ့ ရှီကငျြ့ဖိနျရဲ့ မူဝါဒအကွား မညှပျမိအောငျ ဘယျလိုစီမံနိုငျမလဲဆိုတာ နောငျလာမယျ့ ဘိုငျဒငျရဲ့ ပထမရကျ ၁၀၀ အတှငျး စောငျ့ကွညျ့ရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
တဈနှဈကြျောကွာလာပွီဖွဈတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျဘေးအတှငျး သဆေုံးသူ ၂ သနျးကြျော၊ ကူးစကျခံရသူ သနျး ၁၀၀ ကြျောလာတဲ့အခြိနျမှာ ကာကှယျဆေးထိုးမှုတှကေို ကမ်ဘာ့နိုငျငံအခြို့မှာ စတငျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ကူးစကျမှုက အရှိနျရနဆေဲဖွဈပါတယျ။ဗိုငျးရပျဈရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပိုမိုသိလာရခြိနျမှာ ဗိုငျးရပျဈမြိုးဗီဇကှဲတှေ ဆကျတိုကျထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့အတှကျ အခွအေနကေထှကျပျေါလာတဲ့ ကာကှယျဆေးတှနေဲ့ ထိနျးလို့ရပါမလားဆိုတာ သံသယရှိတဲ့အထိ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ထပျမံလလေ့ာခကျြတှအေရ လလေ့ာခကျြအသဈတဈခုမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက ကူးစကျခံရသူမြား၏ ဦးနှောကျထဲမှာ ခိုအောငျးနပွေီး နပွေနျကောငျးသှားပွီးမှ ပွနျဖွဈလရှေိ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။လကျရှိမှာ တောငျအာဖရိကနဲ့ ဗွိတိနျတို့က ဗိုငျးရပျဈမြိုးကှဲတှကေ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျး တဈဒါဇငျကြျောမှာ ကူးစကျနသေလို ဒီမြိုးကှဲဗီဇပွောငျးဗိုငျးရပျဈကလညျး ကူးစကျတာမွနျနသေလို သဆေုံးမှုနူနျးကလညျးမြားတဲ့အတှကျ နိုငျငံတိုငျးက ထိနျးခြုပျနရေတဲ့ အနအေထားပါ။အစ်စရေးဆိုရငျ တောငျအာဖရိကနဲ့ ဗွိတိနျတို့က ဗိုငျးရပျဈမြိုးကှဲတှအေပွငျ လော့ဈအိနျဂလြိဈမှာ ပျေါပေါကျခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမြိုးကှဲသဈကိုလညျး တှနေ့ရေလို့ တတိယမွောကျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ လော့ချဒေါငျးခမြှတျမှုကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလကုနျပိုငျးက စတငျခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ သဆေုံးမှုတှမွေငျ့တကျနတောကွောငျ့ အဆိုပါလော့ချဒေါငျးခမြှတျမှုကို လကုနျအထိ သကျတမျးတိုးထားခဲ့ရပါတယျ။ဒါ့အပွငျ တဈပတျကွာ ခရီးသညျတငျလကွေောငျးခရီးစဉျ အ၀ငျ၊ အထှကျ ပွေးဆှဲပြံသနျးမှုတှကေို ပိတျခဲ့ရပါတယျ။
အာရှမှာ ကူးစကျမှုမွငျ့မားတဲ့‌ နိုငျငံထဲပါဝငျတဲ့ ဖိလဈပိုငျဆိုရငျ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုမွငျ့တကျနလေို့ အသကျ ၁၀ နှဈကနေ ၁၄ နှဈကွား ကလေးငယျတှေ အိမျပွငျထှကျတာကို ယခုရကျသတ်တပတျအတှငျး ပွနျလညျတားမွဈခဲ့ရပါတယျ။အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ ဂြာဗားကြှနျး မာဒီအှနျမွို့မှာတော့ သတငျးတှအေရ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမှု မွငျ့တကျနတေဲ့အတှကျ ရထားတှဲဆိုငျး ၂၄ ဆိုငျးကို ကိုဗဈ-၁၉ လူနာတှအေတှကျ အရေးပျေါဆေးကုသဆောငျတှအေဖွဈ ပွောငျးလဲအသုံးပွုနရေတဲ့ အခွအေနပေါ။တရုတျဆိုရငျ နိုငျငံမွောကျပိုငျး ဟူပပွေညျနယျမှာ ယခုဆောငျးရာသီအတှငျး ရောဂါဖွဈပှားမှုမြားနလေို့ ပွနျလညျထိနျးခြုပျဖို့ လုပျနရေပါတယျ။ဥရောပဆိုရငျလညျး ပွငျသဈ၊ ဂြာမနီ၊ ဗွိတိနျနဲ့ နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ လောချ့ဒေါငျးတှေ ကနျ့သတျပိတျဆို့မှုတှေ ခထြားလို့ လူမှုရေးအရ ပွဿနာတှရှေိခဲ့သလို ဆန်ဒတှပွေခဲ့ပါတယျ။
နယျသာလနျနိုငျငံမှာဆိုရငျ စနနေကေ့ စတငျခဲ့တဲ့ ကာဖြူးအမိနျ့နဲ့ပတျသကျလို့ အမျစတာဒမျမွို့လယျက ရငျပွငျတဈခုမှာ ရာနဲ့ခြီတဲ့ ဆန်ဒပွသူတှေ စု‌ဝေးခဲ့ကွခြိနျ အာဏာပိုငျတှဘေကျက မီးသတျပိုကျတှေ၊ ခှေးတှေ အသုံးပွုပွီး ဆန်ဒပွသူတှကေို လူစုခှဲခဲ့ရတဲ့အထိပါဘဲ။ သွစတွေးလမြှာဆိုရငျ နိုငျငံသားထောငျနဲ့ခြီပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ စညျးမဉျြးတှကေိုဖီဆနျကာ အမြိုးသားနကေို့ ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။နိုငျငံတဈဝနျး အဓိကမွို့ကွီးတှကေ ဆန်ဒပွပှဲတှမှော လူထောငျခြီတကျခဲ့ကွလို့ နှဈပေါကျလာတဲ့ ကူးစကျရောဂါထိနျးခြုပျဖို့ ကနျ့သတျခကျြတှကေ အာဏာပိုငျတှအေတှကျ မလှယျကူတဲ့အနအေထားဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီလို ဗိုငျးရပျဈကို မနိုငျမနငျးကိုငျတှယျနဆေဲမှာ တခွားနိုငျငံရေးပွဿနာတှပေါဖွဈလို့ အခကျတှနေ့တောက ရုရှားနဲ့ အိန်ဒိယပါ။အိန်ဒိယဆိုရငျ အစိုးရရဲ့ စိုကျပြိုးရေးဥပဒေ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ တောငျသူလယျသမားတှေ ဆန်ဒပွနတော အတျောကွာနပွေီဖွဈရာမှာ အတျောလေးဆိုးလာပွီး အကွမျးဖကျမှုတှအေထိ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။နှဈစဉျ ဇနျနဝါရီ ၂၆ ရကျမှာ ကငျြးပနကြေ အိန်ဒိယသမ်မတ နိုငျငံတျောနအေ့ခမျးအနားကို နယူးဒလေီမှာ တငျ့ကားတှေ၊ တပျဖှဲ့တှေ ပါဝငျတဲ့ စဈရေးပွပှဲနဲ့ ကငျြးပလရှေိ့ရာမှာ တောငျသူလယျသမားတှကေ ဒီပှဲကို အပွိုငျဆငျနှဲဖို့ အိန်ဒိယအလံတှနေဲ့ အလှဆငျထားတဲ့ ထှနျစကျအစီးရေ ထောငျပေါငျးမြားစှာ ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
အမြိုးသားနေ့ စဈရေးပွအခမျးအနားတဈခု ကငျြးပနစေဉျအတှငျး ထှနျစကျတှနေဲ့ လယျသမားယာဉျတနျးတှဟော မွို့လယျခေါငျမှာ စု‌ဝေးဖို့အတှကျ အတားအဆီးအရံအတားတှကေို တိုကျဖကျြခြိုးဖောကျခဲ့ကွရာမှာ နံပါတျတုတျကိုငျရဲတှကေ တားဆီးနှိမျနငျးပွီး မကျြရညျယိုဓာတျငှတှေ့နေဲ့ပဈခတျခဲ့ရပွီး လူတဈဦးသဆေုံးပွီး ဒါဇငျနဲ့ခြီ ဒဏျရာတှရေခဲ့ပါတယျ။မှမျဘိုငျးမှာလညျး တောငျသူလယျသမား အငျအား ၁၀၀၀၀ ခနျ့က ဆန်ဒပွခဲ့လို့ မွို့ရဲ့အခွားနရောတှမှောလညျး လုံခွုံ‌ရေးတပျတှနေဲ့ ဆန်ဒပွတောငျသူတှေ ထိပျတိုကျတှေ့ ပဋိပက်ခတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ။သမိုငျးဝငျခံတပျနီလို အထငျကရနရောမှာတော့ လယျသမားတှကေ ရဲအတားအဆီးတှကေို ခြိုးဖကျြဝငျကာ အလံစိုကျထူခဲ့ပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ ဆန်ဒပွတောငျသူလယျသမားတှကေ ဆူပူရမျးကားပွီး ဖကျြဆီးတာတှလေုပျခဲ့ပါတယျ။အာဏာပိုငျတှကေ နယူးဒလေီတဈခှငျရှိ အဓိကလမျးမကွီးတဈခြို့ကို ပိတျထားခဲ့ပွီး လုံခွုံရေးကို တိုးမွှငျ့တငျးကပျြထားခဲ့ရပါတယျ။ရုရှားဆိုရငျလညျး ဖမျးဆီးခံ အတိုကျအခံခေါငျးဆောငျ အလကျဇီ နာဗယျညီ လှတျမွောကျရေး တောငျးဆိုဆန်ဒပွပှဲတှကွေောငျ့ ဆန်ဒပွသူပေါငျး ၃,၇၀၀ ကြျောကို ရဲတပျဖှဲ့က ထိနျးသိမျးခဲ့ရပါတယျ။
ကပျဘေးတှကွေောငျ့ ဆိုငျးငံ့ထားရတဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှဟော ယခုရကျသတငျးပတျအတှငျး ပွနျတှလေ့ာရသလို နောကျထပျလညျးဖွဈလာနိုငျနတောကို နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ တှနေ့ရေပါတယျ။ကူးစကျကပျဘေးက မပွီးသေးသလို ကာကှယျဆေးကလညျး အလငျြမမီသေးတဲ့အတှကျ ဒီလိုဆန်ဒပွတာတှကေ ကူးစကျမှုကို ပိုအားကောငျးစပေမေယျ့ အာဏာပိုငျတှအေနနေဲ့ ထိနျးခြုပျဖို့ခကျခဲနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ဒီအတှကျ နောကျရကျတှမှော ဘယျလောကျထိကူးစကျမှုမွငျ့ဦးမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမယျဆိုတာ ……. ။
ဇနျနဝါရီ - ၂၉
ယခုရက်သတ္တပတ် သတင်းတွေထဲမှာ သတိထားမိတဲ့ သတင်းတွေ အတော်လေးများပါတယ်။ဒီထဲမှာ အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင် သမ္မတဘိုင်ဒင်ရဲ့ ပထမရက်သတ္တပတ် အခင်းအကျင်း သတင်းတွေရယ်၊ ကိုဗစ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ မတည်မငြိမ်မှုဖြစ်တာတွေ စတဲ့ သတင်းတွေက ယခုတစ်ပတ်မှာ အများဆုံး စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုသတင်းတွေထဲကနေ တခြားသတိထားမိစရာ သတင်းရှိပါတယ်။အမေရိကန် ဒုသမ္မတအဖြစ် မကြာခင်ကထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မိုက်ပန့်စ် တာဝန်ကုန်ဆုံးချိန်မှာ နေစရာ နေရာမရှိတဲ့သတင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေမိုင်းတွင်းပေါက်ကွဲမှုမှာ မိုင်းလုပ်သားကိုးဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို ထပ်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၀ ဦးထိရှိလာတဲ့သတင်း၊ ပါကစ္စတန် ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် ဂူဂျရန်ဝါလာမြို့မှာ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ဇနီးနှင့် ကလေးငယ်လေးဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အလှုပ်ရှားဆုံးမီးတောင်ဖြစ်တဲ့ မောင်မာရာပီမီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကနေ ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာ ခိုးယူခဲ့တဲ့ Emotet ဆောဖ့်ဝဲလ် အသုံးချ ဟက်ကာအဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့က ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်း၊ တူရကီရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို တန်ပြန်ဖို့ ယူရို ၂.၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိ စစ်လေယာဉ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို ဂရိနဲ့ ပြင်သစ်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့သတင်း၊ ပါကစ္စတန်သည် နျူကလီးယားဒုံးကျည် နည်းပညာများကို တူရကီသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်း၊ အီတလီမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ကွန်တီ နုတ်ထွက်သွားတဲ့သတင်း စတဲ့ သတင်းတွေလို သတင်းအချို့လည်း ယခုသီတင်းပတ်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်-အမေရိကန် စစ်ပွဲသစ် လာတော့မလား
ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် မှာ အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူလာခဲ့တဲ့ ဘိုင်ဒင်အနေနဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ကြုံခဲ့တာက တရုတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာပါဘဲ။တရုတ်ဘက်က ထရမ့်အဆင်း ဘိုင်ဒင်အတက်မှာ ရုတ်တရက် ယခင်အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်လက်ထက်မှာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အရေးယူပိတ်ဆို့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ သမ္မတအဖြစ် ဘိုင်ဒင် က တာဝန်ယူပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပါ။
စစချင်း ပြဿနာနဲ့စခဲ့ရတဲ့ ဘိုင်ဒင်အတွက် ဒါဟာ တာထွက်တော့မလှခဲ့ပါဘူး။ဘေကျင်းကနေ အမေရိကန်အရာရှိများအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက် ဒါဟာ တန်ပြန်လို့ဆိုရပမယ့်နောက်ကွယ်မှာ ဒီထက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ ထိရောက်မှုရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်မှာ အစိုးရတာဝန်ကြီးကြီးမားမားယူတဲ့သူတွေမှာ လုပ်ခလစာနည်းပါတယ်။ရာထူးတာဝန်ကနေ အနားယူပြီးမှသာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အကြံပေး၊ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ခန့်အပ်လို့ လုပ်ခလစာကောင်းကြတာဖြစ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ထရမ့်အစိုးရလက်ထက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အလုပ်မခန့်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ကာ ပိတ်ဆို့ခဲ့တာပါ။သာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင် အမေရိကန် အစိုးရတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေကို တရုတ်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့တာ ဘာမှသိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် သေသေချာချာကြည့်မယ်ဆိုရင် တရုတ်ဘက်က ပိတ်ဆို့မှုက အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အထိနာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ထိပ်တန်း ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်တွေက ဂျိုးဘိုင်ဒင် ကို သမ္မတတာဝန်ယူယူပြီးချင်း ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ကြေညာခဲ့သော တရုတ်ကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာအရေးယူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ဘက်က ပိတ်ဆို့အရေးယူမယ့် ၂၅ ဦးစာရင်းမှာ ထရမ့်အုပ်ချုပ်ရေးမှ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွမ်ပီအို၊ ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေး ပီတာနာဗာရို၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ရောဘတ်အိုဘရိုင်ရန်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အဲလက်စ်အေဇာနှင့် ဒုတိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး မက်သရူးပေါ်တင်ဂျာတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ဒီလို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ရာမှာ ဒီလူတွေကို “တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခြင်း” နဲ့ တရုတ်အပေါ် အမေရိကန်၏မူဝါဒမှာ “လွန်ကဲတဲ့လုပ်ဆောင်မှု” မှာ အကြီးအကျယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ တရုတ်ဘက်က ထရမ့်လက်ထက် ရှန်ကျန်း၊ ဟောင်ကောင်ကိစ္စတွေနဲ့ တရုတ်အရာရှိတွေကို အရေးယူမှုကို လက်တုံ့ပြန်တာဖြစ်ပေမယ် နိုင်ငံတကာကတော့ အသစ်တက်လာတဲ့ ဘိုင်ဒင်အစိုးရကို ဘေကျင်းက နိုင်ငံရေးအရ စမ်းသပ်နေတာအဖြစ် ရှုမြင်ကျပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရဖြစ်တဲ့ ဘိုင်ဒင်အစိုးရ ရဲ့ “တရုတ်နိုင်ငံကို ပိုမိုတင်းကျပ်ပြင်းထန်တဲ့ ချည်းကပ်မှုကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်” ဆိုတဲ့ မူဝါဒကြောင့် တရုတ်အနေနဲ့ ဘိုင်ဒင်အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်မှုအနေအထားက ယခင်ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်တဲ့ အိုဘားမားအစိုးရလက်ထက်နဲ့ ဘာတွေကွာဟချက်ရှိနေမလဲဆိုတာ သိလိုနေတဲ့ အနေအထားပါ။
ဒီနောက်မှာတော့ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အကြား အခြေအနေက လျင်လျင်မြန်မြန် ကစားကွက်တွေရွှေ့လာပါတယ်။တရုတ်ဘက်က ထိုင်ဝမ်လေကြောင်းထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသံတွေ ထွက်လာပြီးနောက်မှာ တရုတ်အစိုးရဘက်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကို နိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ထားချက်ကို ပြခဲ့တာလို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ် လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဇုန်ထဲ တရုတ်က ဗုံးကြဲလေယာဉ် ၈ စင်းနှင့် ဂျက်တိုက်လေယာဉ် ၄ စင်းကို စေလွှတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒါဟာ အမေရိကန်အတွက် သွေးတိုးစမ်းခံရသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအင်အားပြသမှုအပြီးမှာ အမေရိကန်ဘက်က အားချင်းဆိုသလို ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီး ထိုင်ဝမ်အပေါ် စစ်ရေး၊ သံတမန်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖိအားပေးမှုများ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှာလည်း တရုတ်က နောက်ထပ် စစ်လေယာဉ် ၁၆ စင်းကို စေလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ ထိုင်ဝမ်ဘက်က စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ အမေရိကန် လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘော USS Theodore Roosevelt တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝင်လာတဲ့အတွက် တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက တရုတ်ပိုင်နက်လို့ ကြေညာထားတဲ့ ဘယ်နေရာကိုမဆို ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပြည်ပသင်္ဘောမှန်သမျှကို ပစ်ခတ်တာအပါအဝင် လိုအပ်သလိုလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့တာက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်အမြဲတမ်းကော်မတီကပါ။ဒီလိုခွင့်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ဒါဟာ နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစဉ်လာလို့ တရုတ်ဘက်က ကာကွယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝင်လာတဲ့ အမေရိကန် တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်စုမှာ Roosevelt လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တပ် ခရူဇာစစ်သင်္ဘော USS Bunker Hill နှင့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တပ်ဖျက်သင်္ဘော USS Russell နှင့် USS John Finn တို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာ ဒီလေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောအုပ်စု ရှိနေစဉ်အတွင်း လေယာဉ်စစ်ဆင်ရေးများ၊ ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလေ့ကျင့်ရေးများ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒါဟာ အတော်လေးကိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အနေအထားထိ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကျင်းပသော ဒါးဗို့စ်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် က စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ် မစတင်ဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ထရမ့်လက်ထက် ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်တွေကို ပြန်လည်စုစည်းနေတဲ့ ဘိုင်ဒင်ရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို သွယ်ဝိုက်သတိပေးခဲ့တာပါ။ရှီ က "တခြားသူတွေကိုပစ်ပယ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ဖို့အတွက် အုပ်စုငယ်တွေဖွဲ့တာ ဒါမှမဟုတ် စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ် စတင်တာဟာ ကမ္ဘာကြီးကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်စေဖို့ တွန်းပို့နေတာပါပဲ" လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒင် အနိုင်ရပြီးကတည်းက တရုတ်ဘက်ကနေ ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာ ယိုယွင်းခဲ့ရတဲ့ သံတမန်ရေးကို သမ္မတသစ် ဂျိုးဘိုင်ဒင် အစိုးရလက်ထက်မှာ ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတာပါ။
ဒီလို ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကြောင့် လတ်တလော တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် တင်းမာမှုပြဿနာက ဘိုင်ဒင်အတွက် အထူးအလေးထားရမယ့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒင်ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့ ဘလင်ကန် ကို ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်မှာ ဆီးနိတ်က အတည်ပြုပြီးနောက် ဘလင်ကန် က တရုတ်နဲ့တင်းမာမှုကို ဦးဆုံးကိုင်တွယ်လာရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တာဝန်မယူခင် ရုရှား၊ တရုတ်နှင့် အီရန်တို့ထံမှ စိန်ခေါ်မှုများကို တန်ပြန်ရန် စုစည်းညီညွတ်သော တပ်ဦးတစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့ ဘလင်ကန် က ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ အမေရိကန်အတွက် အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ထမ်းဆောင်တဲ့ရက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီရက်မှာဘဲ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက တရုတ်ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအသင်းနှင့် ကာတာစင်တာတို့ပြုလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ မှားယွင်းအကဲဖြတ်မှုဖြစ်မည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံကို သေနင်္ဂဗျူဟာရန်ဖက်နှင့် စိတ်ကူးယဉ်ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါက ကြီးမားသော သေနင်္ဂဗျူဟာ မှားယွင်းအကဲဖြတ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက "ကျနော်တို့မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိကောင်းရှိမယ် ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ရန်ဖက်တွေမဟုတ်ဘူး။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ကြိုးစားသင့်တယ်" ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ ပြည်သူများပျော်ရွှင်ရေးနှင့် နိုင်ငံပြန်လည်အားအင်ပြည့်ဖြိုးရေး တာဝန်ကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှာဘဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ရဲ့ ရာသီဥတုရေးရာ သံတမန်ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ကယ်ရီ က နှစ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ အခြားသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး အမေရိကန်အနေနဲ့ တရုတ်နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက်ကျင်းပသွားဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အကြား မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၊ ပြင်းထန်နေဆဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဘေးတွေကြောင့် အားလုံးအတွက် စောင့်ကြည့်ရမယ် နိုင်ငံတကာအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အနေနဲ့ တရုတ်ဩဇာအာဏာကြီးထွားလာတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ထရမ့်လက်ထက်မှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သလို ဘိုင်ဒင်လက်ထက်မှာလည်း ဆက်လက်ကြိုးစားမယ့်အနေအထား သေချာပေါက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဓိက ကာလကြာရှည်ရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုရှားနဲ့ ကြန့်ကြာနေတဲ့ New Start နျူကလီးယားလက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ဘိုင်ဒင်နဲ့ ပူတင်အကြား ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုအတွင်း ရယူနိုင်ခဲ့လို့ တရုတ်ပတ်လည်နိုင်ငံတွေနဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တွေကို ပထမ ရက် ၁၀၀ အတွင်း ရယူနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှာဆိုရင် ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နိုဘူရို ကီရှီနဲ့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လွိုက်အော်စတင်တို့အကြား ဂျပန်-အမေရိကန် လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက် အပိုဒ် ၅ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ရင် အမေရိကန်က ဂျပန်နိုင်ငံကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် သဘောတူညီချက်ကို ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ဂျပန်နဲ့ တရုတ်အကြား အငြင်းပွားနေတဲ့ ဆန်ကာကုကျွန်းစုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီဒီဆူဂါနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်းမှာလည်း အမေရိကန် နဲ့ ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံ မဟာမိတ်ပေါင်းစည်းမှုကို ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင် ၂၈ ရက်က ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြောဆိုမှုမှာလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘလင်ကင်ရဲ့ ပြောဆိုမှုမှာလည်း တရုတ်ရဲ့ဖိအားကို တွန်းလှန်ဖို့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်မယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ဘိုင်ဒင်လက်ထက် တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးက ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်က ပိုမှေးမှိန်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘိုင်ဒင်လက်ထက် တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်မယ့် အစီအစဉ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံပတ်လည်ရှိ နိုင်ငံတွေက ဒီကစားပွဲမှာ အရေးပါလာနိုင်တဲ့အပြင် ဒီအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံ မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးကစားမှုကို ခံရဖို့များနေပါတယ်။ဒီအတွက် ဘိုင်ဒင်ရဲ့ မူဝါဒနဲ့ ရှီကျင့်ဖိန်ရဲ့ မူဝါဒအကြား မညှပ်မိအောင် ဘယ်လိုစီမံနိုင်မလဲဆိုတာ နောင်လာမယ့် ဘိုင်ဒင်ရဲ့ ပထမရက် ၁၀၀ အတွင်း စောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးအတွင်း သေဆုံးသူ ၂ သန်းကျော်၊ ကူးစက်ခံရသူ သန်း ၁၀၀ ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုတွေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့မှာ စတင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကူးစက်မှုက အရှိန်ရနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပိုမိုသိလာရချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဗီဇကွဲတွေ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက် အခြေအနေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ထိန်းလို့ရပါမလားဆိုတာ သံသယရှိတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ထပ်မံလေ့လာချက်တွေအရ လေ့လာချက်အသစ်တစ်ခုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ကူးစက်ခံရသူများ၏ ဦးနှောက်ထဲမှာ ခိုအောင်းနေပြီး နေပြန်ကောင်းသွားပြီးမှ ပြန်ဖြစ်လေ့ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာ တောင်အာဖရိကနဲ့ ဗြိတိန်တို့က ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း တစ်ဒါဇင်ကျော်မှာ ကူးစက်နေသလို ဒီမျိုးကွဲဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း ကူးစက်တာမြန်နေသလို သေဆုံးမှုနူန်းကလည်းများတဲ့အတွက် နိုင်ငံတိုင်းက ထိန်းချုပ်နေရတဲ့ အနေအထားပါ။အစ္စရေးဆိုရင် တောင်အာဖရိကနဲ့ ဗြိတိန်တို့က ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေအပြင် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ကိုလည်း တွေ့နေရလို့ တတိယမြောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လော့ခ်ဒေါင်းချမှတ်မှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းက စတင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် သေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့် အဆိုပါလော့ခ်ဒေါင်းချမှတ်မှုကို လကုန်အထိ သက်တမ်းတိုးထားခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် တစ်ပတ်ကြာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းခရီးစဉ် အ၀င်၊ အထွက် ပြေးဆွဲပျံသန်းမှုတွေကို ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အာရှမှာ ကူးစက်မှုမြင့်မားတဲ့‌ နိုင်ငံထဲပါဝင်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမြင့်တက်နေလို့ အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၄ နှစ်ကြား ကလေးငယ်တွေ အိမ်ပြင်ထွက်တာကို ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ပြန်လည်တားမြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာဗားကျွန်း မာဒီအွန်မြို့မှာတော့ သတင်းတွေအရ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု မြင့်တက်နေတဲ့အတွက် ရထားတွဲဆိုင်း ၂၄ ဆိုင်းကို ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေအတွက် အရေးပေါ်ဆေးကုသဆောင်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရတဲ့ အခြေအနေပါ။တရုတ်ဆိုရင် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ်မှာ ယခုဆောင်းရာသီအတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနေလို့ ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်နေရပါတယ်။ဥရောပဆိုရင်လည်း ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်နဲ့ နိုင်ငံအတော်များများမှာ လောခ့်ဒေါင်းတွေ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချထားလို့ လူမှုရေးအရ ပြဿနာတွေရှိခဲ့သလို ဆန္ဒတွေပြခဲ့ပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် စနေနေ့က စတင်ခဲ့တဲ့ ကာဖျူးအမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ အမ်စတာဒမ်မြို့လယ်က ရင်ပြင်တစ်ခုမှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ စု‌ဝေးခဲ့ကြချိန် အာဏာပိုင်တွေဘက်က မီးသတ်ပိုက်တွေ၊ ခွေးတွေ အသုံးပြုပြီး ဆန္ဒပြသူတွေကို လူစုခွဲခဲ့ရတဲ့အထိပါဘဲ။ သြစတြေးလျမှာဆိုရင် နိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စည်းမျဉ်းတွေကိုဖီဆန်ကာ အမျိုးသားနေ့ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ဝန်း အဓိကမြို့ကြီးတွေက ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လူထောင်ချီတက်ခဲ့ကြလို့ နှစ်ပေါက်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ ကန့်သတ်ချက်တွေက အာဏာပိုင်တွေအတွက် မလွယ်ကူတဲ့အနေအထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဗိုင်းရပ်စ်ကို မနိုင်မနင်းကိုင်တွယ်နေဆဲမှာ တခြားနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေပါဖြစ်လို့ အခက်တွေ့နေတာက ရုရှားနဲ့ အိန္ဒိယပါ။အိန္ဒိယဆိုရင် အစိုးရရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် တောင်သူလယ်သမားတွေ ဆန္ဒပြနေတာ အတော်ကြာနေပြီဖြစ်ရာမှာ အတော်လေးဆိုးလာပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေအထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်မှာ ကျင်းပနေကျ အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံတော်နေ့အခမ်းအနားကို နယူးဒေလီမှာ တင့်ကားတွေ၊ တပ်ဖွဲ့တွေ ပါဝင်တဲ့ စစ်ရေးပြပွဲနဲ့ ကျင်းပလေ့ရှိရာမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေက ဒီပွဲကို အပြိုင်ဆင်နွှဲဖို့ အိန္ဒိယအလံတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ထွန်စက်အစီးရေ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားနေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတစ်ခု ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း ထွန်စက်တွေနဲ့ လယ်သမားယာဉ်တန်းတွေဟာ မြို့လယ်ခေါင်မှာ စု‌ဝေးဖို့အတွက် အတားအဆီးအရံအတားတွေကို တိုက်ဖျက်ချိုးဖောက်ခဲ့ကြရာမှာ နံပါတ်တုတ်ကိုင်ရဲတွေက တားဆီးနှိမ်နင်းပြီး မျက်ရည်ယိုဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးပြီး ဒါဇင်နဲ့ချီ ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်။မွမ်ဘိုင်းမှာလည်း တောင်သူလယ်သမား အင်အား ၁၀၀၀၀ ခန့်က ဆန္ဒပြခဲ့လို့ မြို့ရဲ့အခြားနေရာတွေမှာလည်း လုံခြုံ‌ရေးတပ်တွေနဲ့ ဆန္ဒပြတောင်သူတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းဝင်ခံတပ်နီလို အထင်ကရနေရာမှာတော့ လယ်သမားတွေက ရဲအတားအဆီးတွေကို ချိုးဖျက်ဝင်ကာ အလံစိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဆန္ဒပြတောင်သူလယ်သမားတွေက ဆူပူရမ်းကားပြီး ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေက နယူးဒေလီတစ်ခွင်ရှိ အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ချို့ကို ပိတ်ထားခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်တင်းကျပ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားဆိုရင်လည်း ဖမ်းဆီးခံ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အလက်ဇီ နာဗယ်ညီ လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ဆန္ဒပြသူပေါင်း ၃,၇၀၀ ကျော်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
ကပ်ဘေးတွေကြောင့် ဆိုင်းငံ့ထားရတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ ယခုရက်သတင်းပတ်အတွင်း ပြန်တွေ့လာရသလို နောက်ထပ်လည်းဖြစ်လာနိုင်နေတာကို နိုင်ငံအတော်များများမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ကူးစက်ကပ်ဘေးက မပြီးသေးသလို ကာကွယ်ဆေးကလည်း အလျင်မမီသေးတဲ့အတွက် ဒီလိုဆန္ဒပြတာတွေက ကူးစက်မှုကို ပိုအားကောင်းစေပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက် နောက်ရက်တွေမှာ ဘယ်လောက်ထိကူးစက်မှုမြင့်ဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်ဆိုတာ ……. ။
ဇန်နဝါရီ - ၂၉